कुनाकानी : मेरो परिवेश: 2016
Carpooling : केही फरक अनुभुति
Carpool को ठ्याक्कै अर्थ के हो मलाई थाहा छैन । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि भएको इन्धन अभाव र त्यसबाट सार्वजनिक यातायातमा आवत-जावत गर्नेहरूलाई परेको मर्का कम गर्न नेपाली-नेपाली बीच देखिएको अद्वितीय एकताको रूपमा काठमाडुका सडकमा व्यापक भयो Carpool । निजी दुइपांग्रे र चारपांग्रे सवारी भएकाहरू घण्टौँ सम्म सार्वजनिक यातायात कुर्न वाध्य र फाट्टफुट्ट चलेका गाडीमा सास्तीपूर्ण आवतजावत गरिरहेका सर्वसाधारणलाई आफ्नो सवारीमा लिफ्ट दिन खुलेर प्रस्तुत भए ।
त्यस निम्ति फेसबुकमा Carpool र liftmandu जस्ता पेजहरू बनाएरै लिफ्ट लिन र दिन थालियो , यी पेजहरू आफैमा कतिको प्रभावकारी रह्यो त भन्न सकिँदैन तर यिनमा भएको सक्रियताबाट एउटा कुरा प्रष्ट भयो - हामी नेपाली एक अर्कालाई परेको बेला मन फुकाएर सहयोग गर्न तयार छौँ ।
लिफ्ट लिन र दिनका लागी फेसबुकको अफरले काम गर्यो की गरेन थाहा भएन , तर नीजी सवारी भएकाहरू बस स्टप वरपर आएर कहाँसम्म जाने भनि सोध्दै लिएर जाने दृश्य साँच्चै नै सम्झना गर्न लायक क्षण छन् । यसबाट यस्तो हुन गयो की कसैलाई लिफ्ट नदिँदा आफू कतै स्वार्थी त देखिएन ? एक्लै यात्रा गर्नेहरूको भित्री मनमा कसैलाई लिफ्ट दिन नपाउँदा नमज्जा महसुस गरेको पनि देखियो । Black मा किनेको तेल अनि सर्वसाधारण लाइ लिफ्ट । लिफ्ट लिने र दिने कतिपय पात्र उभ्याएर साहित्यकारहरू साहित्य कोर्न पनि भ्याइसकेका थिए ।
यो पंक्तिकार आफै लिफ्ट दिन तम्सिँदाका केही पल यहाँ सम्झना गर्न खोज्दैछु ।
Carpooling - 1
गएको केही वर्ष अघिदेखि नै एकजना टन्न दाह्री पालेका विद्यार्थी नेता कहिले बल्खु त कहिले किर्तिपुर वरीपरी भेटिन्थे । अझै पनि भेटिन्छन् । उनलाई हेर्दा लाग्थ्यो यिनको काम नै लिफ्ट लिनु हो कहिले बल्खु देखि किर्तिपुर त कहिले किर्तिपुर देखि बल्खु । बस स्टप नजिकै चनाखा आँखाले कताबाट मोटरसाइकल आउँदैछ हेरिरहन्थे , आफ्नो नजिक आउनेबित्तिकै हातले इशारा गरेर रोक्न खोज्थे धेरैले रोकेर उनलाई लिएर जान्थे , केहीले रोक्थेनन् । यि महानुभावलाई सार्वजनिक यातायातमा होइन अरूको मोटरसाइकल पछाडि बसेकै बढि भेटिन्थ्यो ।
एकपल्ट यो पंक्तिकारले उनलाई लिफ्ट दिँदा सोधेको थिएँ – 'यसरी नै चलेको छ है ? ' उनी गम्भीर देखिन्थे । "चलेकै छ । अधिकांशले लिफ्ट दिएकै छन् ।" उनी भन्दै थिए- "हेर्नुस् लिफ्ट त्यस्ता मान्छे दिँदैनन् जो खराब काम गर्छन् र अरूबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् । समाजमा अरूलाई दुःख दिनेहरू आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्नेहरू लिफ्ट दिन तर्किन्छन् तर यहाँ तपाइँ जस्ता खुला दिल भएकाहरू नै धेरै छन् ।" यसो भन्दै उनले मलाई पनि फुर्क्याए ।
Carpooling - 2
एकपल्ट शहिदगेटमा किर्तिपुर जाने कोही हुनुहुन्छ भन्दै अफर गर्न थालेँ । मोटरसाइकल पछाडी सामान देखेपछि नजिक आइसकेकाहरू पनि फेरी बसको बाटो नै हेर्न थाले । एकजना महिला नजिक आइन् अनि पछाडी भएको सामान उनलाई काखमा लिन लगाएर उनलाई लिएर गएँ । सामान देखेर तर्केकाहरू वाल्ल परेर हेरिरहे ।
Carpooling - 3
कालीमाटीबाट एकजना युवती चढिन् । कुपण्डोलसम्म पुग्दा नपुग्दै रोक्ने इशारा गरिन्, रोकिदिएँ । अब झरेर उनी Thank u भन्न लागेकी होला भन्ठानेर Welcome भन्न खोजेको मात्र के थिएँ पछाडि फर्केर हेरेको त उनी त सडक पारि पुगीसकिछन् ।
Carpooling - 4
शहिदगेटबाट एकजनालाई किर्तिपुरसम्म लिइ आउँदा झर्नेबेला thank u को बदलामा उनले कति पैसा लिनुहुन्छ दाई पो भनिन् । आफैलाई लाज लाग्यो – हाय मैले कस्तीलाई लिफ्ट दिएछु ।
Carpooling - 5
बिहानको समय ५ बजेतिर किर्तिपुरबाट बल्खु हुँदै रत्नपार्क जाने गाडी १५ / १५ मिनेटमा छुट्छ, नाकाबन्दीताका पनि यो नियमित थियो । दिउँसो बरू चढ्न गाह्रो थियो तर बिहान सजिलै चढ्न सकिन्थ्यो । सार्वजनिक गाडी चढ्न सकिने समयमा लिफ्ट नदिउँ जस्तो लाग्दो रहेछ । तर कोही मान्छे अचम्मका हुँदा रहेछन् हातको इशाराले रोक्छन् , म कहाँ जाँदैछु नसोधी सिधै चढ्छन् । उनीकहाँ जाँदैछन् सोध्छु । ‘म जानुपर्ने त कालीमाटी सम्म हो , तपाइँ जहाँसम्म जानुहुन्छ त्यहिँ रोकिदिनुहोस् ।’ ‘म त कालीमाटी जानैपर्दैन ’ भन्छु । उनी भन्छन्- ‘तपाइँ जहाँ बाट लानुहुन्छ म मिलाएर झर्छु तपाइँलाइ अफ्ठ्यारो बनाउँदिन ’ पो दिन्छ, म त ट्वाँ ।
जे होस् नाकाबन्दी पछि शहरमा देखिएको सहयोगी भावना एक अर्कामा सदा कायम रहोस् जय Carpooling .
Posted by वसन्त बलामी at 9:49 PM 1 comment:
पत्रकारिता र पत्रकार
पत्रकारीता भन्दा रुचिकर, व्यापक र रसलाग्दो पेशा अरू कुनै छैन । हजारौं मानिससमक्ष दिनदिनै पुगी विचार प्रवाह गर्ने, सल्लाह दिने, शिक्षा दिने तथा उनीहरूलाइ मनोरञ्जन प्रदान गर्ने काम कम मजाको छ त । मलाइ त आफू पत्रकार नबनेकोमा थक्थक् पो लागेको छ— वैज्ञानिक थोमस अल्बा एडिसन
म डाक्टर भएको भए डाक्टरको मात्र जीवन थाहा हुन्थ्यो । यदि इन्जीनियर भएको भए त्यसकै मात्र जीवनको अनुभव हुन्थ्यो । तर म पत्रकार भएँ त्यसैले मलाइ डाक्टर, इन्जीनियर, ड्राइभर, शिक्षक, पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता, महिला, समाजसेवी सबैको जीवन अनुभव गर्न र बुझ्न पाएको छु । — पत्रकार विजयकुमार पाण्डे
के के छन् त यो ब्लगमा ?
खै के खै के ? (6)
तस्वीर कुनो (4)
पत्रकारिता महात्म्य (3)
पेसागत कुनो (2)
फिचर कुनो (4)
रंग कुनो (5)
वैचारिक कुनो (4)
समाचार कुनो (7)
साहित्य कुनो (8)
जब कुनै कुराले मेरो मन मष्तिस्कलाइ छुन्छ तब इन्टरनेटका अक्षरहरू बहन्छन् मेरो ब्लगमा पोस्ट बनेर
मेरा मनपर्ने पत्रिका
basantabalami@yahoo.com. Watermark theme. Powered by Blogger.